Norwey: Hooyo Soomaaliyeed Oo Carruurtii Laga Qaatay – Bandhiga
Norwey: Hooyo Soomaaliyeed Oo Carruurtii Laga Qaatay
Raxmo Maxamed waa hooyo dhashay saddex Carruur ah islamarkaana ku nool magaalada Bergen caasimada labaad ee dalka Norway, Carruurtaasi oo ay la wareegeen Hay’adda daryeelka Carruurta ee wadanka Norway, kadib mas’uuliyad gudasho la’aan lagu eedeeyey waalidiinta Carruurta.
Hooyadaan ayaa sheegtay in dib looga ceshaday sharcigii ay ku joogtay wadanka Norway, taasoo saameen xoog leh ku yeelatay inay dib u hesho carruurteeda maadaama xiligan ay tahay hooyo sharci la’aan ah.
Maantii shalay oo ku beegneed 25/FEB/2019 ayay u bilaabanaysay musaafurinta ay ku amartay dowladda Norway Hooyo Raxmo Maxamed, iyadoo aanan heysan Carruur iyo sharci midna, isla markaana dib loogu celinayo magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya, arrinkaasoo Murugo iyo xanuun fara badan ay ku reebtay Raxmo oo ah dhibane ay ka maqan yihiin Carruur saddex wiil ah.
“Waxaa dareemi kara xanuunka i heysta marka lagaa qaato carruurtaada haddana aadan joogin wadankaagii hooyo, lagaana ceshado sharcigii lagu siiyey, xanuunka noocaasi oo kale ah waxaa ila dareemaya waalidiinta jooga dalka dibadiisa gaar ahaan wadamada carruurta la iska qaato” sidaas waxaa tiri Hooyo Raxmo Maxamed.
Sidoo kale Hooyo Raxmo Maxamed ayaa sheegtay inay la xirriirtay gar-yaqaan caalami ah isla markaana ay ku kaceyso lacag dhan 130,000 Kun oo Krone lacagta laga isticmaalo wadanka Norway una dhiganta qiyaas ahaan $14,000 kun oo Dollar.
Waxay ka codsatay Jaaliyadaha ku nool dalkaani inay caawiyaan si ugu yaraan loo baajiyo dib u celinta deg dega ah ee lagu musaafurinayo Hooyadan Carruurteeda ay ka maqan yihiin.
Bile Maxamed, Bandhiga, Bergen Norway.